ဥရောပဘောလုံးကို သက်ရောက်လာတဲ့ ယူကရိန်း စစ်ပွဲ ၊ နောက်တဆင့် တက်တဲ့ ဘာဆာ ၊ ပွဲကျန်နိုင်ပြီး အဆင့် ၄ နားကပ်လာတဲ့ အာဆင်နယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဥရောပဘောလုံးကို သက်ရောက်လာတဲ့ ယူကရိန်း စစ်ပွဲ ၊ နောက်တဆင့် တက်တဲ့ ဘာဆာ ၊ ပွဲကျန်နိုင်ပြီး အဆင့် ၄ နားကပ်လာတဲ့ အာဆင်နယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ရုရှ နိုင်ငံက ယူကရိန်း နိုင်ငံ အတွင်း ကျူးကျော် ဝင်ရောက်တဲ့ ကိစ္စ ဟာ ဥရောပ တခုလုံးကို အကြီးအကျယ် ဂယက်ရိုက် စေခဲ့သလို ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် လက်အောက်က ပွဲစဉ်တွေ အပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရုရှ နိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ် ဟာ ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ အိမ်ရှင် အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားပေးရဖွယ် ရှိသလို ရုရှ နဲ့ ယူကရိန်းမြေပေါ်မှာ ကစားမယ့် ဥရောပ ပွဲစဉ်တွေ ကိုလည်း ကြားကွင်းတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ စတင် စဉ်းစား နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရုရှ အကြီးအကဲ ပူတင် နဲ့ ရင်းနှီးမှုထက်ပိုတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိသူ ရိုမန် အေဘရာမိုဗစ်ချ် ကိုလည်း ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ရောင်းချဖို့ ဖိအားပေး သွားမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတခုဟာလည်း ယမန်နေ့က ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဗြိတိန် အစိုးရဟာ ရုရှ အခြေစိုက် Aeroflot လေကြောင်းလိုင်း ကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက တနှစ် ပေါင်သန်း ၄၀ တန် စပွန်ဆာ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုထားပြီး အသင်းရဲ့ ပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေ မှာ Aeroflot ရဲ့ လေယာဉ်တွေ နဲ့ သွားလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲအတွက် စပိန်ကို သွားရောက် ရာမှာတော့ အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်း ကို အသုံးမပြုခဲ့ ပါဘူး ။
ရှော်ကေး အသင်းကတော့ ရုရှ အခြေစိုက် ရေနံ လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်တဲ့ Gazprom စာသား ( ဂျာစီ အဓိက စပွန်ဆာ ) ကို အသင်းရဲ့ ဂျာစီ ကနေ ဖယ်ရှားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ရုရှ ဘောလုံးသမားတွေ ထဲမှာတော့ ဖီဒေါ စမိုလော့ဗ် ဟာ ယူကရိန်း ကို ရုရှ ရဲ့ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်မှု ကို ပထမဆုံး ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပြီး စစ်ပွဲတွေ မဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းသွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး နည်းပြ ကွန်တီ က သူဟာ အသင်းမှာ အရာရာကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် မပြောင်းလဲ သေးဘဲ ရှိနေကြောင်း ၊ သူဟာ စပါးကို ကူညီဖို့ ဆန္ဒ ရှိကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အန်တိုနီယို ကွန်တီ ဟာ စပါး အသင်းမှာ ပျမ်းမျှ တပွဲကို ၁.၇၁ မှတ်သာ ရယူထားနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ နည်းပြ ဘ၀ သက်တမ်းမှာ အနည်းဆုံး အမှတ်ယူနိုင်မှု အဖြစ် ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နောက်ခံလူဟောင်း ဂျေမီကာရေဂါ က မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်း အတော် ကျဆင်း နေပြီး လက်ရှိ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ပွဲထွက် စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ပြောဆို ဝေဖန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ရှုံးထွက် ဒုတိယ အကျော့ ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ နာပိုလီ အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၄-၂ နဲ့ အနိုင် ရပြီး နှစ်ကျော့ပေါင်း ၅-၃ နဲ့ နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် ကတော့ ရိန်းဂျားစ် နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျ ခဲ့တာကြောင့် ပထမအကျော့က ရှုံးနိမ့်မှုကို မချေဖျက် နိုင်ဘဲ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
၁၆ သင်း အကြို ရှုံးထွက် အဆင့် အပြီး မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ၊ ပေါ်တို ၊ ရိန်းဂျားစ် ၊ အတ္တလန်တာ ၊ စပို့တင်း ဘရာဂါ ၊ ရီးရဲဘက်တစ် ၊ ဆီဗီးလား နဲ့ လိုက်ပ်ဇစ် တို့ နောက်တဆင့် တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အီးမရိတ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲကျန် မှာတော့ အာဆင်နယ် ဟာ အဆင့် ၄ နေရာ ပြိုင်ဘက် ဝုဗ် ကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၅ နေရာကို တက်လှမ်း လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းနဲ့ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းတို့ဟာ လီဗာပူး အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဂျိုး ဂိုးမက်ဇ် ကို အပြိုင် စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
၂၀၁၈ တုန်းက ဆောက်သမ်တန် အသင်း နည်းပြ အဖြစ် ကနေ ထွက်ခွာပြီး နောက်ပိုင်း ဘောလုံးလောက နဲ့ ၃ နှစ်ကျော် ကင်းကွာ နေတဲ့ နည်းပြ မာ့ဟုချ် ဟာ လိဂ်တူး ကလပ် ဘရတ်ဖိုဒ့် အသင်းကို နည်းပြအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဖိုးတန် comeback နိုင်ပွဲမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများ
Next Article မန်ယူနိုက်တက် ကို မေ့ထားပြီး ချဲလ်ဆီး ကို ကျော်တက်နိုင်ရေး အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းခံလိုက်ရတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းသားများ